Ny WWDC dia antenaina hampiakatra bebe kokoa noho ny hatrizay ny sandan'ny fizarana Apple | Avy amin'ny mac aho
Be ny andrasana amin'ny WWDC manaraka an'i Apple amin'ny 7 Jona. Izany hoe ao anatin'ny roa andro monja. Izany no antenain'ny mpampiasa, vaovao lehibe miaraka amin'ny fandrosoana lehibe izay mahatonga antsika hahatsapa fa manana fitaovana tsara indrindra eny an-tsena isika. Fa antenaina ihany koa fa aorian'ny hetsika dia ny anjaran'ny orinasa amerikana hampiakatra ny sandanao mahatonga ny orinasa ho sarobidy kokoa eo amin'ny lafiny toekarena.
Keynote an'i Apple ao amin'ny WWDC dia mety ho catalyst ho an'ny tahiry Apple noho izay hita ara-tantara, noho ny fifantohana amin'ny Apple Silicon, araka ny nambaran'i Morgan Stanley tao anaty naoty ho an'ireo mpampiasa vola ary nangonin'ny magazine manokana AppleInsider. TheMpanadihady Morgan Stanley Katy Nanoratra i Huberty fa ny WWDC Alatsinainy ho avy izao dia tsy mpamily lehibe amin'ny fampisehoana stock Apple. Na izany aza, niova izany tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Nandritra izay 10 taona lasa izay, Apple dia nanatsara ny S&P 500 tamin'ny mediana 120 teboka fototra ary 110 teboka fototra tamin'ny herinandro voalohany sy ny herinandro faharoa taorian'ny hetsika WWDC. Tao anatin'ny iray volana aorian'ny teny ifotoran'ny developer dia nihoatra ny teboka fototra S&P 500 tamin'ny 70. Na izany aza, tao anatin'izay roa taona lasa izay, ny zava-bitan'ny Apple taorian'ny WWDC dia nanjary nazava kokoa. Apple dia nihoatra ny endriny S&P 500 amin'ny teboka 440 amin'ny herinandro voalohany aorian'ny fisehoan-javatra ary teboka miisa 600 amin'ny volana manaraka.
Na dia antenainay ho fivoaran'ny evolisiona aza ny ankamaroan'ny fanavaozana ny rindranasa sy ny rindranasa noho ny tamin'ny herintaona, mino izahay fa hanasongadina ny ezaka hanitarana ny fampiasana Apple Silicon namboarina tao an-trano i Apple ary mety hanangana MacBook vaovao. Izay mahatonga ny WWDC amin'ity taona ity ho mpiorina manan-danja kokoa noho ny tamin'ny taona lasa. Ny tena ifantohan'ny hetsika, mety ho Apple Silicon izy io.
Ny kaonferansa WWDC 21 dia hanamarika ny tsingerintaona nahaterahan'ny chip M1 sy mpandalina Huberty manantena i Apple fa hanohy ny tanjaky ny tetezamita lavitra an'i Intel.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny WWDC dia antenaina hampiakatra ny sandan'ny Apple mizara mihoatra ny taloha